Jawaahir Baarqab: Waa daciifnimada UGUS inay Muslimiin afuraya ku soo qaadaan weerar | SNTV
Jawaahir Baarqab: Waa daciifnimada UGUS inay Muslimiin afuraya ku soo qaadaan weerar
Guddoomiyaha Ururka haweenka Gobolka Banaadir jawaahir Baarqab oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in ay aad uga xunyihiin weerarkii fashilmay ee xalay kooxda UGUS ay ku qaadeen dad muslimiin ah oo isku diyaarinayay in ay afuraan kuwaas oo ku sugnaa Hoteellada Siyaad iyo Wehliye.
“waa Daciifnimada UGUS inay Muslimiin Afuraya ku soo qaadaan weerar iyaga oo Aad ugu faraxsan inay laayaan dadkaas muslimka ah, Hotellada Siyaad iyo Wehliye yaa ku sugan maciidanaa jooga waa Arrin Bareer Cad ah taas oo lagu laaynayo Shacabka Soomaaliyeed” ayey tiri Guddoomiye Jawaahir.
Dhanka kale Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in ka haween ahaan ay la shaqayn doonaan Ciidammadda qaranka ee marwalba u taagan Difaacidda Muslimiinta Soomaaliyeed ee dadka iyaga ka mid ka ah ee la baxay Shabaab leynayaan.
Xalay Xilli Ummadda Soomaaliyeed ay u fadhiyeen Afur ayaa weerar u muuqda mid fashilmay waxa ay kooxda Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS ku soo qaadeen hoteellada Siyaad iyo Wehliye oo ku yaala Magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen Dad Soomaaliyeed oo Afurayay.
Ciidammadda qaranka oo markasta u taagan bad’baadinta Bulshada Soomaaliyeed ayaa isku taagay in ay weerarkaas ka hortagaan iyaga oo bad’baadiyay in badan oo ka mid ah dadkii afurayay ee xalay shabaab ay soo weerareen.
Awoodda Qaran ee Bulshada Soomaaliyeed ay haystaan ayaa ah Ciidan Dacad iyo Dadnimo isku darsaday kuwaas oo had iyo jeer Mudan in La Ammaano, isla Markaana lala shaqeeyo si looga hortago cidwalba oo sida UGUS Umadda Dhibaataynaysa.